Adeegto Ethiopian ah oo Kaw Laggaga Siiyey Kuwait – Rasaasa News
Nov 17, 2011 Adeegto Ethiopian ah oo Kuwait Kaw Laggaga Siiyey
Muwaadin Kuwaiti ah ayaa la xidhay, ka dib kolkii lagu soo ashkateeyey in uu garaacis ku dilay gabadh Ethiopian ah oo ka Adeegaysay gurigiisa, warkan ayaa lagu daabacay talaadadii wargayska Kuwait Newspaper.
Warka adeegto Ethiopian oo garaacid lagu dilay ayaa laga soo xigtay ilo ka mida garsoorka dalka Kuwait, Al-Jarida daily ayaa sheegtay in ninkan oo aan magaciisa la sheegin uu wareeray si axmaqnimo ah u garaacay adeegtada mudo todoba maalmood ah, sabab ah way diiday in ay shaqayso.
Baadhid lagu sameeyey maydka oo bilow ah, ayaa sheegay in adeegtadu ay u dhimatay “garaac xun oo si halisa oogadeeda u dhaawacay, ayaa keenay dhiig bax gudaha ah,” iyo waxaa kale oo lagu arkay calaamado biyo la,aan jidhka.
The Al-Jarida daily, waxay sheegtay ninka laga shakiyey ayaa adeegtada oo il daran u qaaday xafiiska Hawalli ee shaqaalaynta, oo ku yaal meel 15 Kilometres u jirta Koonfurta magaalada Kuwait, halkaas oo ay dhulka ku dhacday deedna dhimatay.
Wadanka Kuwait ee saliida qaniga ku ah ayey tirada dadkiisu tahay 3.5 milyan oo ruux. Kuwaas oo sadex melood laba dalka Kuwait ay yihiin Ajnabi. Shaqaale ay tiradoodu tahay 600, 000 oo badankoodu yihiin eeshiyaan ayaa ka shaqeeya guryaha, kuwaas oo ay cabashado ah in si xun ula dhaqan ah ay soo noqnoqoto.